Maxay aad ugu le'deen saraakiishii doorashada Indonesia? - BBC News Somali
Maxay aad ugu le'deen saraakiishii doorashada Indonesia?
Dalka Indonesia waxaa bishii hore ka qabsoomay doorasho madaxtinimo, oo isugu jirtay mid qaran iyo mid deegaan, taas oo ahayd doorashadii ugu ballaarnayd ee hal maalin la qabto caalamka oo idil.
Haatan waxay su'aali ka taagan tahay in la bixiyey magdhowga masuuliyiintii doorashooyinka qabanyey ee ku naf waayey halkaas intii ay doorashadu socotay, in ka badan 500 oo qof ayaa lagu warramayaa in ay dhinteen intii ay doorashadu socotay iyo maalmihii xigayba.
Warbaahinta ayaa sheegaysa in culayska ay leedahay tirinta iyo isku dubbaridka codadka ay sababtay geerida qaar badan oo kamid ah shaqaalihii doorashada ka shaqaynayey.
Balse waxaa dad badani iswaydiinayaan ayaa ah in dadkaas oo dhan ay dhiman lahayeen haddii Indonisia aysan doorashadaasi ka dhici lahayn?
Waa imisa mas'uuliyiinta geeriyooday?
Doorashadii dhacday 17 April ayaa ahayd shaqo aad u ballaaran taas oo ay ka qayb galeen 190 milyan oo codbixiyeyaal ah, kana dhacday dal ka kooban 18,000 oo jaziiradood oo qiyaas ahaan ku fadhiya bed gaaraya laba milyan oo kilometer oo square ah.
Guddiga doorashooyinka Indonesia ayaa BBC-da u sheegay in shaqaale gaaraya 7,385,500 oo qof ay doorashada ka shaqaynayeen, 5,672,303 oo qof oo dadkaas kamid ah ayaana ahaa shaqaale rayid ah.
Inta soo hartay ayaa ahaa ciidamo sugayey ammaanka goobaha codbixinta.
Dhammaan codadka la dhiibtay ayaa lagu tiriyey gacanta, waxayna wararku intaas ku darayaan in tirinta codadku ay soconaysay habeenkii oo dhan tan iyo inta laga gaarayo waqtiga kama dambaysta ah.
28-kii bishii April, guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in 270 qof oo ka mid ah shaqaalihii ka shaqaynayey doorashooyinka ay dhinteen sababo la xiriira xaaladaha adag ee shaqada.
Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in 1,878 oo qof oo shaqalaas ka mid ahna ay xanuusadeen.
Isugaynta tirada dadka dhintay ayaana kor u dhaafaysa 550 qof.
Dhimashadu miyay ka badnayd intii la filayey?
Ayadoo toddobo milyan oo qof ay doorashada ka qayb galeen, ayaa waxaa la filan karaa in dad badan ay dhimanayaan inta ay doorashadu socoto taas oo u dhiganta celceliska xaddiga dhimashada qaran ee dalkaas.
Su'aanshu waxay tahay: tiradaasi aad miyay sare ugu kacday doorashada awgeed?
Sida laga soo xigtay hay'adda caafimaadka adduunka ee (WHO), celceliska geerida sanadlaha ah ee dalka Indonesia waa 7.16 kunkii qofba sanad kasta ( xog la aruuriyey 2017)
Sidaas darteed markii toddobo milyan oo shaqaale ah lagu dabbakho celceliskaas, waxaa soo baxaysa in 137 qof ay dhintaan maalin kasta.
Aan kasoo qaadno in mas'uul kasta oo kamid ah kuwa doorashooyinka uu shaqaynayey muddo afar maalmood ah - taas oo ay ku jirto diyaar garoowgii doorashada, doorashada qudheeda iyo tirinteedaba.
Haddaba marku lagu saleeyo, celceliska dhimashada ee sare ku xusan, waxaa la filan karaa in 548 qof ay dhinteen intii ay doorashadu socotay.
Waxayna aad ugu dhaw dahay middii ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka Indonesia.
Yey waxyeellada ugu badani soo gaartay?
Xisaabtan soo dhawanyta uun ah, kuma jirto da'da, jinsiga qofka, xaaladaha caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee saamaynta ku leh.
Mas'uuliyiinta dalka Indonesia ayaa sheegay in dadka dhintay intooda badan ay ahaayeen dad da'doodu ka wayn tahay 50 jir.
Sidaas darteed waxaa la fili karaa in dhimashadu ay ku badnaato shaqaalaha doorashooyinka marka loo eego guud ahaan dadweynaha dalkaas ku nool.
Warbixin ay soo saartay, wasaaradda caafimaadka Indonesia, waxa ay sheegtay qaar kamid ah xaaladaha caafimaad ee dhimashada keenay, waxaana kamid ah wadno xanuun, xanuunka faalligga, dhibaato xagga neefsashada ah, iyo qallalka.
Ma ogaan karno inta qof ee u dhintay xaaladahaas caafimaad, balse qaar kamid ah dadka cisbitaallada la seexiyey ayaa ka cabanayey daal iyo culays dhanka maskaxda ah, intooda badan ayaana 24 saacadood u shaqaynayey si aan kala joogsi lahayn si ay u dhammeeyaan tirinta codadka.
Intaas ayaa waxaa u weheliyey in qaarkood ay dhowrkii maalmood ee doorashada ka horreeyey ay hubinayeen in wax kasta ay diyaar yihiin.
Cimilada ayaa kululayd bishii April. In kastoo aanay sidaas xad dhaaf u ahayn.
"Waxaa loo baahan yahay baadhitaan faahfaahsan oo lagu sameeyo caafimaadka guud ee shaqaalaha doorashooyinka si loo ogaado in xaddiga dhimashadu ay aad uga badan tahay intii la filayey" ayuu BBC-da u sheegay.